Taxi-be 400Ar; midina rehefa tsy handeha! | mandimby maharo
Taxi-be 400Ar; midina rehefa tsy handeha!
Posted on 12 November 2012 12 November 2012 by Mandimby Maharo
400 Ar ny saran-dalan’ny Taxi-be eto Antananarivo Renivohitra. Tsy nihemotra ary nampihantra io faondrotana io ireo mpitatitra mikambana ao amin’ny Union des Cooperatives de Transport Urbain, UCTU. Tsy izy rehetra nefa no nanaraka ity baiko nomen’ny avy ao amin’ity vondrna ity fa misy ihany ireo kaoperativa mitazona ny saran-dalana ho 300 Ar. Ary na ny samy ao anatin’ny kaoperativa iray aza dia samy manana ny saran-dalany ireo mpitatitra sy fiara tsirairay. Amin’ny ankapobeny dia ny 85% ireo mpitatitra ny nampiakatra ny saran-dalany. Nitaraina lava ny ho maty antoka noho ny fisondotry ny vidin-tsolia sy ny vidin’ireo kojakoja fanolo amin’ny fiara manko ireo mpitatitra ireo no nahatonga azy hampiakatra ny saran-dalana toy izao. Izany indrindra koa hoy izy ireo no mahatonga ny fiara ho ratsy sy tsy manaraka fenitra toy izao.
Raha voalaza herinandro maromaro mialoha manko fa hampiakatra saran-dalana ny mpitatitra nanomboka ny 01 novambra teo dia tamin’iny herinandro ny 05 novambra iny io vao tena hit any fiantraikany. Ny 20% isanjaton’ny mponina eto an-drenivohitra ihany manko hoy ny tombana no mampiasa ireny fitanterana iombonana ireny. Nefa na dia kely toy izany aza ny tahan’ireo mpampiasa ireny fiara ireny dia tsapa fa mandringa tanteraka ny fiainan’ny tananan-Antananarivo raha vao tsy misy azy. Ny mpianatra sy ireo mpiasa birao madinika tokoa manko no tafiditra ao amin’io 20% io. Mpiasa madinika izay tsy mahavidy fiara manokana ho azy noho ny hakelin’ny karamany. Raha jerena tsotra tokoa dia fampiakarana 100Ar fotsiny no nataon’ireo mpitatitra. Saingy mihoatra ny 33% io fisondrotana io raha atao ny kajy. Raha atao koa ny fampitahana dia avo telo heny amin’ilay fampisondrotan-karana 10% isan-taona azon’ireo 20% mpampiasa fitanteram-bahoaka izany. Tsy lazaina intsony ny fisondrotry ny vidin’etana mihoatra ny 12% isan-taona.
Ny ankamaroan’ny mpiasa sy ny mpianatra eto an-Drenivohitra dia tsy mody any antranpny amin’ny atoandro. Toy izao farafahakeliny ny vola lany amin’ny fitanterana isam-bolana.
–	Mandeha taxi-be in-2 ny olona iray, mandroso sy miverina, rehefa miasa sy fmianatra. Mandany 800 izy amin’izany.
–	22 andro no andro iasana ao anatin’ny volana iray -> 800Ar x 22=17 600Ar/volana/olona no lany amin’ny fitanterana.
–	Ny tokatrano iray nefa dia misy olona 3 farafahakeliny miandeha taxi-be isanandro-> 17 600Ar x 3= 52 800Ar/volana/tokatrano
Taratry ny fahalalahan’ny fandraharahana sy ny toekarena tokoa manko izao fandraisana fanampaha-kevitra samy irery nataon’ny mpitatitra izao. Na dia nisy tokoa aza manko fihaonana andro vitsivitsy mialoha teo amin’ireo mpitatitra sy ny avy ao amin’ny ministera ary ny ATT dia toa tsy nahavaha olana izany. Nihizingizina tsy nilefitra ny mpitatitra, ary nipirina tsy niteniteny ny mpitondra. Teo koa ny fihetsiketsehan’ireo izay mba milaza fa mpiaro ny zon’ny mpanjifa; nefa toa nisitrisitrika sy tsy sahy nandon-databatra akory izy ireny nanoloana ny hamafisan-dohan’ireo mpitatitra. Hany herin’ireo mpanjifa dia ny manaiky izay ataon’ireto farany. Tsy azo hodian-tsy hita tokoa manko fa dia manao izay danin’ny kibony ireo mpitatitra ireo. Ankoatry ny haratsian’ny fiara noho ny antony voalaza etsy ambony dia eo koa ny fanaovana taingim-be. Mihoatra olona 3 na 4 amin’ny tokony ho izy araka ny bokin-draharaha hatrany ny isan’ny olona entin’izy ireny. Io dia vokatry ny tsy fahampian’ny fiara miasa amin’ny zotra iray ka tsy maharaka ny isan’ny mponina. Noho ny hamehana dia voatery tsy maintsy mitaingina “tamboho”. Eo koa ny tsy fanajana sy tsy firaharahin’ny mpamily sy ny mpanampy azy ireo olona tanteriny ireo. ankoatr’izay ny fijanonana ela eo amin’ny fiantsonana iray ka mahasorena ny mpanjifa.
Hatreto aloha izany dia samy mandeha samy miaritra eny ny rehetra. Izay tsy manana vola amenoana io saran-dalana io dia mandeha an-tongotra. Ary izay mba mafimafy loha ka sahy dia mifamaly sy mifanao farateny amin’ireo mpitatitra ireo. Nefa tsy hampiova na inona na inona izany satria ireo mpamily sy mpanampy azy dia mpiasa madinika manatanteraka baiko avy amin’ny tompon’ny fiara fotsiny ihany koa.
Tags: Antananarivo, MADAGASCAR, Taxi-beCategories: societé